Ikhabhinethi yothando kwiiAlps ezintle-Sivuliwe! - I-Airbnb
Ikhabhinethi yothando kwiiAlps ezintle-Sivuliwe!
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMitia
Ikhabhinethi ilele kumbindi wentlambo yeAlpine iZgornje Jezersko, ejikelezwe ziincopho zeentaba ezifikelela ngaphezu kweemitha ezingama-2500. Kukurhoxa okuthe cwaka kwaye kushushu kwabo bafuna ukufumana uxolo lwengqondo kwindalo, umoya omtsha, uhambo oluhle kunye nezinye zezona mbono zimangalisayo ukusuka kwigumbi labo lokulala. Kwabo bafuna ukusebenza mandongeze ukuba ikhabhinethi ikwaxhotyiswe nge-hi-speed fiber-optic internet/wi-fi.
Nceda ujonge ikhabhathi encinci nje i-20m ukusuka kule, ungayifumana kuluhlu lwam.
Ikhabhathi inamagumbi okulala ama-2 (iibhedi ezi-4) ezineebhalkhoni, igumbi lokuhlala elinendawo yokuphumla (ibhedi eyi-1) kunye netafile yokutyela enendawo yokuhlala eyaneleyo ejikelezileyo, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye netyotyombe lamaplanga langaphandle elinezixhobo zebbq, izitulo zasehlotyeni njl.
Kukho ii-closets ezaneleyo.
Nceda ugcine engqondweni,
i-cabin ayishushumbiswanga, indawo yomlilo evaliweyo (kunye nezifudumezi zombane njenge-backup) kwigumbi lokuhlala ngowona mthombo uphambili wokufudumeza kwiinyanga ezibandayo, xa zenziwe ngokufanelekileyo zikhaba iesile!
Kwiinyanga zasebusika ikhabhinethi isoloko ifudunyezwa kwangaphambili ukuze ufike. Ifuna iyure okanye ezimbini ukuze ifudunyezwe, kodwa yakuba itshisiwe igcina ubushushu kangangeeyure. Njengomthombo wesibini wokufudumeza, kukho izitovu zombane kwigumbi ngalinye.
Kukho iintsuku ezi-6 ngeveki imarike evulekileyo 5 min umgama wokuhamba, iivenkile zokutyela ezi-2 (imizuzu eyi-10) kunye nenye indawo yokutyela ngasechibini (imizuzu eyi-20) ekufutshane.
INDAWO KUNYE NEZOHAMBO:
Nangona ubungenakutsho ukuba kwiifoto i-cabin ilele kumbindi welali. Nangona kunjalo, ikhabhinethi isebucala kakhulu, ijikelezwe ngamaplanga amancinci, igadi kunye nendawo yokupaka.
Igadi kunye nebalcony ijonge ngaseAlps enika ezinye iimbono ezimangalisayo ukusuka kwinto yokuqala kusasa xa ilanga likhanyise iintaba njengamakhandlela, kude kube sekutshoneni kwelanga.
Maninzi amathuba okunyuka intaba, iindlela ezininzi zokuhamba lula, ukuhamba phambili kunye nokunyuka. Ebusika kukho iinketho zokutyibiliza ekhephini, ukutyibilika kwekhephu kunye nekona (45min ngemoto) kukho indawo enkulu yokutyibiliza ekhephini iKrvavec.
Kukho uhambo lukawonke-wonke oluya kwisixeko esikhulu sokuqala saseKranj kunye nesixeko esikhulu saseLjubljana. Isitishi sikumizuzu emi-5 ukuhamba. Uhambo oluya eLjubljana luthatha iyure enye ngemoto/ 2 hrs ngebhasi.
Ngemoto ungaya kwezinye iikona ezintle zaseSlovenia:
I-Bled (i-1 hr), i-Kranjska Gora (iiyure ezi-2), i-Postojna (iiyure ze-1.5) kwaye ekubeni i-Austria i-10 min kude, yibale loo nto.
Kukho eyona ndawo inkulu yaseSlovenia yokutyibilika ekhephini iKrvavec kufutshane nje (imizuzu engama-45 ngemoto).
I-intanethi ye-fiber-optic ekhawulezayo
Intaba, isikhokelo sokunyuka intaba (bhala ngolwazi...)
Umkhokeli webhayisekile (bhala ngolwazi...)
Ilungile kakhulu iwayini yesiSlovenia esuka kwiseli yewayini kumazantsi ntshona eSlovenia (bhala ngolwazi...)
..nceda (IZIQULATHO EZIYI-SENSITIVE EFIHLILE) Jezersko ngolwazi oluthe kratya malunga nentlambo.
4.86 · Izimvo eziyi-213
IZgornje Jezersko yintlambo ezolileyo yeAlpine. Ikhabhinethi ilele kwilali encinci enabemi abanobuhlobo. Nangona ikhabhathi ikwilali isebucala, ngakumbi ngamaxesha ashushu xa kukho uhlaza oluninzi olujikeleze...
Ukufumana ulwazi oluthe vetshe ngobumelwane kukho (IZIQULATHO EZINGUNDOQO EFIHLEKILEYO) umbono wesitrato uyafumaneka.
Umbuki zindwendwe ngu- Mitia
Izitshixo zidla ngokusiwa kuwe ngabanini okanye ngabasebenzi.
Iilwimi: English, Deutsch, 日本語
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Zgornje Jezersko